Yonke Ngomhla woNyaka woMhlaba
Ikwahlula iintsuku ezimbini emhlabeni
Ihlabathi lihlulwe kwiindawo ezingama-24, ezicwangcisiweyo ukwenzela ukuba ilanga liba lixesha xa ilanga liwela i-meridian, okanye umda wokude, nendawo nayiphi na indawo. Kodwa kufuneka kubekho indawo apho kukho umehluko kwiintsuku, kwindawo ethile ngosuku "eqala" kweli hlabathi. Ngaloo ndlela, umgca we-180-degree we- longitude , i-half half way ejikeleze iplanethi esuka eGreenwich, eNgilani (kwi- degrees 0 longitude ), malunga nendawo apho umda wexesha lomhlaba wonke ukhona.
Ukuwela umgca ukusuka empuma ukuya entshona, kwaye ufumana usuku. Umnqamlezo ukususela entshonalanga ukuya empuma, kwaye ulahlekelwa ngumhla.
Ngaphandle komda wohlobo lwamazwe ngamazwe, abantu abahamba ngasentshonalanga kwiplanethi bayakufumanisa ukuba xa bebuyela ekhaya, kubonakala ngathi unomhla owongezelelweyo udlulile. Le meko iyenzeka ngokwenene abasebenzi baseMagellan xa bebuyela ekhaya emva kokujikeleza kwabo uMhlaba.
Nantsi indlela umgca wexesha lomhlaba wonke usebenza ngayo: Masithi usuka kwi-United States ukuya eJapan, kwaye ucinga ukuba uhamba e-United States ngoLwesibili kusasa. Ngenxa yokuba uhamba entshonalanga, ixesha lihamba phambili libulela kwimimandla yexesha kunye nesantya apho inqwelo yakho ihamba khona. Kodwa ngokukhawuleza xa uwela umnqweno wexesha lomhlaba wonke, ngokukhawuleza ngoLwesithathu.
Ekhaya lokubuyela ekhaya, usuka eJapan waya eUnited States. Uhamba eJapan ngoMsombuluko kusasa, kodwa njengoko uwela i-Pacific Ocean, usuku lukhawuleza ngokukhawuleza njengoko uhamba kwiindawo ezihamba ngasempuma.
Nangona kunjalo, ngokukhawuleza xa uwela umnqwanqwa wexesha lomhlaba, usuku luya kutshintsha ngeCawa.
Umhla woMhla uyaba neJog
Umgca womhla wamazwe ngamazwe awukho umgca ngokuthe ngqo. Ukususela ekuqaleni kwayo, uye wagxininisa ukugweba amazwe angabikho kwiintsuku ezimbini. Igoba kwi-Bering Strait ukuze ugweme ukubeka iRashiya esempuma-mpuma kwimimandla eyahlukileyo kunelo lonke ilizwe.
Ngelishwa, i-Kiribati, iqela leziqithi ezingama-33 ezisasazekayo (ezingama-20 ezihlala kuwo) ePacific Ocean Ocean, zahlula ngokufakwa komgca wexesha. Ngo-1995, ilizwe lagqiba isigqibo sokuhambisa umda wexesha lomhlaba wonke. Ngenxa yokuba umgca wusekwe yimvumelwano yezizwe ngezizwe kwaye akukho zivumelwano okanye imimiselo esemthethweni ehambelana nomgca, ininzi yeentlanga zehlabathi zilandele iKiribati kwaye yahambisa umgca kwiimephu zazo.
Xa ubuyekeze imephu eguqukileyo, uza kubona enkulu i-zigzag, egcina iKiribati yonke into ngaloo mini. Ngoku kwimpuma yeKiribati neHawaii, ezisekuloo ndawo ejikelezayo , ziphela usuku ngaphandle.
AmaLwandle amakhulu kunawo wonke kwihlabathi
IJografi yamazwe aphesheya kweChina
Ngaba i-Spring Equinox iqala ngoMatshi 19 okanye ngo-20?
Izindlela ezahlukene zokubhala ze-hiragana "ki" ne "sa"?
Ukurekhoda kweDrum: Indlela yeGlyn Johns